I-detstonia-vascular dystonia xa ukhulelwa
Intloko iphuka, intliziyo iphosa, amandla aphezulu ... Usela ikofi - ayincedi, uzama ukulala-ayiyi kuphuma. Yintoni le? Ingumqondiso wokuba une-vegetative vascular dystonia. Iimbangela ze-vegetative vascular dystonia ngelixa ulinde umntwana uza kufumana kwinqaku ethi "Vegeto-vascular dystonia ngexesha lokukhulelwa".
Kwenzeka ntoni kuwe:
ukukhwabanisa umzimba, ukubetha, ukuphazamiseka kwamalungu amaninzi omzimba;
Ngaba kukho iintlobo ezahlukeneyo zeVSD? Ewe, ngokuqhelekileyo iintlobo ezintathu ze-vegetovascular dystonia ziyahluka. Ngokuqhelekileyo kufumaneka kubantu abanomdla. Uxinzelelo lwegazi oluphantsi, i-anemia, kunye nokuphelelwa yintlungu ziqhelana nabantu abancinci. Olu hlobo luvela kubantu abanobunzima obukhulu. Uxinzelelo olungakumbi, ukujuluka nokuvuvukala kunokubonisa ukuba umntu unesifo seVSD. Uhlobo olunzima kakhulu lwesifo, njengoko lubonakaliswe ngcinezelo ivela kwi-low to high.
Ziziphi iingcali eziqhagamshelana nazo?
Okokuqala kufuneka uhambe ugqirha. Ugqirha omuhle akayi kutyumba ngokukhawuleza "umsebenzi" we-valerian aze athumele umculi we-massage kumhlobo, kodwa uya kunika iingcebiso kwiingcali ezincinci (i-neurologist, i-cardiologist, i-neurologist, i-phlebologist). Kukhulu xa umhlaza wezilwanyana esebenza kwisixeko okanye kwindawo - ngokuqinisekileyo uya kukwazi ukuqonda imeko yesigulane. Kodwa ulungele into yokuba ukuxilongwa kukude kwaye ngamanye amaxesha akhululekile.
Ngaba i-malaise iyingozi xa ikhulelwe?
Iimpawu ze-VSD kumama ozayo ziyancenga inkambo yokukhulelwa. Ngoko, uxinzelelo lwegazi oluphantsi lunokubangela ukuba umntwana angabi naso i-oxygen kunye nezondlo. Iintsholongwane eziqhubekayo kunye nokunganakwa kuphazamisa impilo yabasetyhini kuphela, kodwa kunye nosana. Ngaba ndinokunceda? Ukukrazula i-dystonia, kufuneka ubeke umyalelo wonke umzimba. Ngaba kuphazamiseka entliziyweni? Ngokungathandabuzekiyo, okokuqala siya kwi-cardiologist. Kodwa ukuba ujongana nomzimba omnye, awunakwenzeka ukufezekisa injongo. Ukuphuculwa kancinci akusususi ingxaki kunye nenkqubo yemifuno! Kamva, kuya kubangela ukungasebenzi kakubi emsebenzini wezitho ezibuthathaka zomzimba womntu. Nika ingqalelo kwiindawo ezinjalo "ezibuthathaka". Mhlawumbi, kuyimfuneko ukuyisebenzisa unyango lwenhliziyo, isibindi, izintso, ukususa ingxaki yengqondo ngokusebenzisa amayeza. Yintoni ekufuneka uqale ukuyifumana? Ngokuphila ngendlela esebenzayo. Ngokubanzi, kubonakala ngathi:
Ukusekwa kwimiqathango yombuso womhla.
Yiba nokuzilolonga umzimba, rhoqo uhamba emoyeni omtsha.
Umoya, kodwa ngaphandle kobuqili! Ukunciphisa izinga lokushisa kwamanzi ngokukhawuleza, ngaphandle kokuzulaza ngokukhawuleza kwelinye icala okanye kwelinye.
Ukuqhuba ikhosi yokusilalisa: ngeentloko - ummandla wekollar, kunye neengxaki ezinentliziyo.
Faka isicelo sesilwanyana: itiye yemifuno, ibhafu, i-aroma, umbala kunye nomculo unyango, ukucamngca.
Iimama zesikhathi esizayo zifanele zenze oku, zibonisane phambi kwabo kunye nomdlavuza-gynecologist wabo. Musa ukuzifunela!
Ngaba kukho ithuba lokufumana ngokugcwele?
Ukusuka kwi-VSD kwaye unokuphelisa ngonaphakade! Isiphambili sokuphumelela sisifo esilungileyo kunye nesimo sengqondo esinzulu somntu kwimpilo yabo. Ubuvila ngumhlobo ongcono kakhulu we-vegetative dystonia! Qeqesha umzimba wakho nomoya. Gcina umzimba wakho ebomini! Ngoku siyazi ukuba kukho i-dystonia ye-vegeto-vascular ngexesha lokukhulelwa.
Shintsha kwiinyanga ezili-9
Ziziphi izinto endifanele ndizithathe esibhedlele?
Indlela yokukrazula ukuvuvukala ngexesha lokukhulelwa
Kunokuba i-thrush ihlukumeza umntwana ozayo
Isitayela se-safari kwiingubo
Iingcebiso ezi-3 ezilungileyo kakhulu kuma-ruble ama-525: udweba iintolo njengomculi wokwenza!
Ubusi - eyona mveliso yonyango ebalulekileyo
Yintoni eyenza i-haircut ne-scissors ezishisayo
Iinyanga ezintathu ezikhulelweyo, isithombe
Indlela yokuchazela umntwana ukuba utywala kunye nokutshaya kuyingozi
Ikhekhe loqobo "I-velvet ebomvu": iindlela zokupheka ezinyathelo kunye neefoto
Amakhowe athatywayo ngesitayela saseKorea
Indlela yokubuyela kumntu emva kokuhlukana